How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ndingabakhusela njani abantwana bam xa bephumela ngaphandle ukuya kuzilolonga okanye esikolweni? – Messages for Mothers
How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ndingabakhusela njani abantwana bam xa bephumela ngaphandle ukuya kuzilolonga okanye esikolweni?
Ukongeza ekunxibeni isifonyo, ebantwaneni abangaphezu kweminyaka emibini nangaphezulu
Khumbuza abantwana bakho ukuba bazibhekelise kude ngokugcina iimitha enye ukuya kwezimbini kude nabanye abantu, kuquka nabahlobo babo.
Ungazisebenzisi izixhobo zalapho kudlalwa khona okanye ezinye izinto ekungathi kanti zibanjwe ngabahambi.
Sebenzisa isibulali-zintsholongwane rhoqo ezandleni yaye hlamba izandla zabantwana bakho xa bebuya ekhaya.
Fundisa abantwana bakho:
Sisetyenziswa njani isicoci sezandla esibulala iintsholongwane: khuhla izandla zide zome ngokupheleleyo.
Benza njani xa behlamba izandla zabo: bamanzisa izandla zabo, batyikile ngesepha imizuzwana angama 20 ezandleni lo gama becula iculo labo elimnandi baye babuye bahlambe ngamanzi.
Ucoceko lokuphefumla. Oku kuthetha ukukhohlela nokuthimla kumphakathi wengqiniba egotyiweyo, uvale umlomo nempumlo okanye kwiphepha lokosula elithambileyo nekufuneka belilahle entweni evalwayo baze bahlambe izandla.
Ukuba bazinqande ukubamba ubuso babo.
← What if my child is in contact with someone with COVID-19: Yintoni endingayenza ukuba umntwana wam udibene nomntu one- COVID-19? → What to know about the spread of COVID-19 in children and babies: Ukusasazeka kokusuleleka